Hotjar: heatmaps, funnel, firaketana, analytics ary valiny | Martech Zone
Hotjar: Heatmaps, Cornels, fandraisam-peo, Analytics ary valiny
Asabotsy 27 Febroary 2016 Asabotsy Jolay 8, 2017 Douglas Karr
Hotjar manome fitaovana feno ho an'ny fandrefesana, firaketana, fanaraha-maso ary fanangonana fanehoan-kevitra amin'ny alàlan'ny tranonkalanao amin'ny fonosana mora vidy. Tsy mitovy amin'ny vahaolana hafa, i Hotjar dia manolotra drafitra miaraka amina drafitra mora vidy mora ahafahan'ny fikambanana miteraka fahitana momba an tranonkala marobe tsy voafetra - ary ataovy azon'ny an isan'ny mpampiasa tsy voafetra.
Anisan'izany ny fitsapana Hotjar Analytics
Heatmaps - manome fanehoana an-tsary ny tsindry ataon'ny mpampiasa anao, paompy ary fihetsika mihorakoraka.
Firaketana mpitsidika - firaketana ny fitondrantenan'ny mpitsidika amin'ny tranokalanao. Raha mahita ny tsindry ataon'ny mpitsidika anao ianao, paompy, fihetsiky ny totozy dia azonao atao ny mamantatra ireo olana momba ny fampiasa amin'ny ﬂ y.
Fantsona fiovam-po - fantaro amin'ny pejy iza ary amin'ny dingana iza no nandao ny fifandraisan'izy ireo tamin'ny marikao ny ankamaroan'ny mpitsidika.
Form Analytics - Hatsarao ny taham-pahavitan'ny endrika an-tserasera amin'ny alàlan'ny fikarohana hoe iza amin'ireo saha no ela loatra vao vita, izay avela banga, ary ny antony mahatonga ny mpitsidika anao handao ny endrikao sy ny pejy.
Poll feedback - Hatsarao ny traikefan'ny tranonkalanao amin'ny fanontanianao ireo mpitsidika ny zavatra tadiavin'izy ireo ary inona no misakana azy tsy hahatratra azy. Mametraha fanontaniana amin'ny mpitsidika manokana na aiza na aiza amin'ny tranokalanao sy ny tranokalanao.
fanadihadiana - Manamboara ny fanadihadihana hainao amin'ny alàlan'ny fanovana mora. Angony ny valiny amin'ny fotoana tena izy avy amin'ny fitaovana rehetra. Tsinjarao amin'ny alàlan'ny rohy Internet, mailaka na asao ny mpitsidika anao alohan'ny andaozany ny tranokalanao mba hanala sarona ny fanoherana na ny ahiahiny.
Mampiasà mpampiasa azy - Mametraha mpandray anjara amin'ny fikarohana sy ny fanandramana ataon'ny mpampiasa mivantana avy amin'ny tranokalanao. Angony ny mombamomba anao, ny antsipirian'ny fifandraisana ary manolora fanomezana ho takalon'ny fanampiany.
Midira amin'ny fitsapana Hotjar maimaim-poana
Hotjar dia manolotra an'ity dingana 9 ity hanatsarana ny traikefan'ny mpanjifanao sy ny fiovam-pony.
Atsangano a Sarintany hafanana amin'ny fivezivezena mafy sy ny pejy fitobiana avo lenta.
Jereo ny 'Drivers' miaraka amin'ny Poll feedback amin'ny pejy fitobiana fivezivezena be.
Survey ireo mpampiasa / mpanjifa misy anao amin'ny alàlan'ny mailaka.
Atsangano a lantonoara hamantatra ireo sakana lehibe indrindra amin'ny tranokalanao.
Hametraka Poll feedback amin'ny pejy Barriers.
Hametraka Heatmaps amin'ny pejy Barriers.
Use Playback an'ny mpitsidika mamerina ireo fotoam-pivoriana misy ny mpitsidika ny pejy Barrier.
miaramila vaovao Mpitsapa mpampiasa hampiharihary ireo mpamily ary hitandrina ireo sakana.
Ampahafantaro ny 'Hooks' amin'ny a Poll feedback amin'ny pejy fahombiazanao.
Tags: famakafakana ny fandefasana torolàlanafantsom-panovanaheatmapheatmappingheatmapshotjarfiraketan'ny mpampiasafiraketana ny mpitsidikafitaovana fitsidihana mpitsidikafanadihadiana nataon'ny mpitsidika
Reach7: Ataovy izay hahitana mpihaino marobe amin'ny tambajotra sosialy